Miara-miasa amin'ny Raspberry Pi i Google handefa ny Virtual Assistant | Fitaovana maimaim-poana
Betsaka amintsika no efa manana fitaovana marani-tsaina ao an-tranontsika izay mifehy ny fitaovana sisa tavela ao an-trano. Spice an'ny Amazon Echo na Google Home saingy namboarina manokana. Ny sasany kosa misafidy ny hividy ny fitaovany amin'ny Amazon na Google. Na izany aza, misy ihany koa ny mety hafa, ny azo atao ara-dalàna, azo araraovana ary azo atao maimaimpoana.
Nanatevin-daharana an'i Raspberry Pi i Google tamin'ny famoronana tetikasan'ny Hardware Free. Noho izany, namorona mpanampy virtoaly an-trano izy ireo izay afaka manangana ny tenanay fa hanana ny haitao an'ny Google sy Raspberry Pi.
Ity mpanampy virtoaly ity dia nantsoina hoe VoiceKit na farafaharatsiny toa izao antsoina hoe tranonkala izany izay hahitantsika ny fampahalalana rehetra momba ilay fitaovana. Ity fitaovana ity dia mahaliana azo vidiana tamin'ny alàlan'ny laharana farany The MagPi.
VoiceKit no mpanampy virtoaly voalohany maimaimpoana izay noforonina niaraka tamin'i Google sy Raspberry Pi
Ity magazina ity dia noforonin'ny Raspberry Pi Foundation ary tao amin'ny nomerao farany dia niraikitra ny kitapo fanamboarana ho an'ity mpanampy virtoaly ity, izay misy ny singa toy ny birao Pi Zero W, mpandahateny sns ... Ary koa ny mpampiasa afaka mampiasa rindrambaiko Google ianao mba hananana mpanampy virtoaly miasa ary tsy misy olana.
Amin'izao fotoana izao, amin'ny alàlan'ny magazine no fomba tokana ahazoana ity kitapo mpanampy virtoaly ity. Fa ity dia zavatra efa niseho tamin'ny tabilao Pi Zero ary volana maromaro taty aoriana dia nanomboka nahita izany tao amin'ny magazay Hardware Libre izahay. Etsy ankilany Google dia nanamafy izany Ity kitapo mpanampy virtoaly ity dia tsy ho zavatra tokana alefako amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Raspberry Pi. Ny fahalianan'izy ireo amin'ny birao dia tena izy ary hanohy handefa tetikasa ofisialy miaraka amin'ny rindrambaiko Google sy ny fitaovana Raspberry Pi izy ireo.
Ny marina dia sarotra ny mahatratra ny kioska espaniola ny The MagPi fa marina ihany koa ny fananana «Free Hardware and Free Software», Afaka manangana io mpanampy virtoaly io ihany isika Raha tsy misy olana, eny, mila mahay mandehandeha kely isika satria tsy maintsy manangana kit aloha aloha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Raspberry Pi » Miara-miasa amin'ny Raspberry Pi i Google handefa Virtual Assistant
Boom Daniel dia hoy izy:
Toy izany koa mandra-panombohany Android miasa ho an'ny voaroy.
Valiny tamin'i Daniel Bum
Manoro hevitra anao aho ny hiditra amin'ny voaroy miaraka amin'ny Lion 2. Tsara kokoa ny famadihana azy ary vokatra manaitra amin'ny fanontana 3D